Madaxda Soomaalida oo shir uga furmay magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Madaxda Soomaalida oo shir uga furmay magaalada Muqdisho.
Seteembar 6, 2016 3:49 b 0
Garoowe, Sep 06 2016–Magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta ka furmay shirma wadatashiga madasha qaran ee doorashada Soomaaliya, oo ay ka qaybgelayaan madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada.
DHEGEYSO-Shirkii maamul u samaynta Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo baaqday.
DHEGEYSO-Cumar Cabdirashiid,*Waa lasoconaa dadka qaraxyada ka dambeeya*.